Mahajanga : Niara-nifaly tamin’ny mponina ny ekipan’ny Fitondrana -
AccueilSosialyMahajanga : Niara-nifaly tamin’ny mponina ny ekipan’ny Fitondrana
12/05/2018 admintriatra Sosialy 0
Maro no milaza sy miezaka ny manely tsaho fa nitsoaka ary tsy hita na koa hoe tsy tazana intsony ny ekipan’ny Fitondrana ankehitriny tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina, manoloana ny fanakorontanana ataon’ireo milaza fa Depiote ho an’ny fanovana amin’izao fotoana izao. Voaporofo izany ankehitriny fa lainga nezahina nafafy tsotra izao.
Nigadona tany Mahajanga ny alakamisy 10 mey teo mantsy ny ekipan’ny Fitondrana ahitana ny mpanolotsaina manokan’ny Filohan’ny Repoblika, Mbola Rajaonah. Tamin’izany indrindra no niarahan’izy ireo nifaly niaraka tamin’ny mponin’i Mahajanga tao amin’ny Complexe Sportif tamin’ny alalan’ny fety nokarakaraina manokana. Tsy nisy kabary politika mihitsy anefa tamin’izany lanonana natao ho an’ny mponin’i Mahajanga izany fa fety niarahana fotsiny ihany. Tomefy olona ary nifanitsa-kitro ny tao amin’ny Complexe Sportif de Mahajanga ny andron’ny alakamisy 10 mey.
Izany hoe, saika tazana tao avokoa, na ireo mponina any an-toerana, na ireo delegasiona avy any Morondava, Melaky, Toamasina, Brickaville, Toliara sy Manakara ary Antananarivo mandray anjara amin’ny hetsika « Festival Moudajangaya M’chimé » izay mizotra amin’izao fotoana izao any an-toerana , ary nasaina manokana manatrika sy manome voninahitra izany ny ekipan’ny Fitondrana.
Voaporofo, araka izany, fa tsy misy mpihaino sady tsy misy mpiraharaha sy mamaly ny fiantsoana sy fanentanana ireo mponina ao Mahajanga hanatanteraka fikomiana sy fanakorontana ataon’ireo depiote voafidy ao an-toerana. Noho izany, tsy misy olona manaraka ireo milaza ho depiote ho an’ny fanovana ao Mahajanga. Mitohy hatrany ny andavanandrom-piainan’ny mponina. Ny mpiasam-panjakana sy ny tsy miankina miasa hatrany, ny mpianatra mianatra… toraka izany koa ireo manatanteraka ny adidiny amin’ny fitadiavana isan’andro, toa ny mpivarotra, mpitatitra, sns.